Last nohavaozina: Dec. 28 2017 | 2 min namaky
Efa samy nahita maloto mpivady miresaka amin'ny sarimihetsika, TV ary dia namaky izany tamin'ny boky, fa aza no miasa? Ary ny zava-dehibe kokoa, tokony hampidirana resaka maloto ao an-fifandraisana?
Tsy araka ny inoan'ny, rehefa miresaka maloto tsy voatery hoe zavatra hafahafa na avy any mba hahazoana ny vokatra irina. Amin'ny alalan'ny fanarahana ny toro-hevitra eto ambany ity, ianao dia afaka mampitombo ny fifandraisana zest sy ny firaisana ara-nofo ny fiainana na dia mbola ho anao.
Manampy Zavamanitra Mampahatsiro Sakafo: Toy ny zava-manitra manampy tsirony amin'ny fandrahoan-tsakafo,, resaka maloto manampy tsirony amin'ny fifandraisana. Na izany aza, ianao Mila mitandrina toy ny lahateny maloto be loatra, toy ny zava-manitra be loatra, dia ho afa mankaleo mihitsy aza, ary afaka ho simba ny fifandraisanao. Manampy fientanentanana sy ny voly, manandrana mampiasa izany fomba izany kely izany ho mahafinaritra sy ny tsy ampoizina ianao isaky ny miresaka amin'ny mpiara-miasa maloto.
Mijanona aina: Manan-danja indrindra dia ny manao tendrony hoe izay no mahazo aina amin'ny. Na izany mazava tsara, na saro-takarina, raha tsy mahazo aina loatra hoe izany dia azo inoana fa tena ho toa hafahafa koa. Ary mba ho marin-toetra tanteraka, Vitsy ny zavatra ratsy noho hafahafa resaka maloto.
Aoka ianao ho mora hita: Mazava, nasty, sexy, sy ny sary maloto lahateny ho lehibe toy ny efitrano fandrian afaka mitarika ho amin'ny firaisana ara-nofo mpankafy. Fa raha ianao, rehefa miresaka an-kolaka maloto, ho hitanao fa hamorona vokany naniry mafy toy ny firaisana ara-nofo izany dia miteraka olana ho fanampin'ny fanaovana ny namanao mieritreritra anao mandrakariva. Ny hoe saro-takarina, raha ny tena izy, mety raha ny marina kokoa noho ny mahery, rehefa miresaka mivantana maloto.
Lafin-javatra manan-danja iray hafa momba an-kolaka resaka maloto dia azonao atao izany fotsiny eny rehetra eny. Avy fety ny mihantona amin'ny namako ny ho any am-piasana, tsotra “Enga anie ireo olona hafa tsy manodidina tahaka ny hiala voly no alehako ao an-tsaina ny zavatra izay tiako hatao ho anao”, dia handao ny namanao manontany tena momba ny inona marina anananao ao an-tsaina.
Mazava, Dinika amin'ny efitra fatoriana: Na dia tendron'ny ravin mihitsy ilay nataony ny ambony, sary maloto hanao firaisana ara-nofo lahateny ary nafana, mampientam-po kokoa, ary kokoa mpankafy – tsara ny zavatra na iza na iza no te tao amin'ny efitrano fandrian. Aza avela ny teny mazava Ovao moramora anao avy amin'io playful, sexy efitrano fandriana lahateny. Fotsiny ho tratra ao amin'ny fotoana sy ny filazana izay te “mahatsapa toy izany ianao tsara tao anatiko”, dia tsy hitodika ny mpiara-miasa amin'ny fanorana fa ho mitovy aminy ihany koa. Raha mbola hatahotra na hafahafa, mafy kokoa “Hmm”, “Eny”, ary “Andriamanitra ô” manome ihany koa ny vokatra.
Erotica: Ny tsotra indrindra angamba dia ny mamaky tendro na ny olon-tiany Erotica tantara. Tsy izy ireo ihany no manitatra ny resaka maloto lisitra fizahany fa hanome anao hevitra maro ho an'ny toe-javatra, kilalao, ary ny andalana ankoatra ny mahafoy anao nitodika indrindra rehefa avy mahavita mamaky steamy sehatra.
Na efa tamin'ny ny namany nandritra ny volana vitsivitsy, na folo taona, hampatanjahana ny maloto dia afaka miresaka sy manaitaitra, nampiany iray manontolo ny sehatra vaovao ny fifandraisanareo.